प्रदेश ५ सरकार : काम आफु नगर्ने दोष भने संघीय सरकारलाई ! « News24 : Premium News Channel
प्रदेश ५ सरकार : काम आफु नगर्ने दोष भने संघीय सरकारलाई !
रुपनदेही । जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना तीब्र बन्न थालेको छ । प्रदेश नम्बर पाँचले सरकार गठन भएको सात महिना वितिसक्दा समेत आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन ।
ऐन/कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक समेत लैजान नसक्दा प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले जनजीवनमा प्रभाव पर्ने काम गर्न नसक्नुमा संघीय सरकारको रवैयालाई दोष दिइदै आएको छ । सरकार गठनका ताका प्रदेश नम्बर पाँचले केही महत्वाकांक्षी योजना अघि सा¥यो । तर, गठनको सात महिनामा कर्मचारी अभाव, संघीय सरकारको रवैयालाई दोष दिंदै आइएको छ । मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा आवश्यक भवन निर्माण बाहेक अन्य कार्यक्रममा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम समेत कार्यान्वनयमा ल्याउन नसक्नु प्रदेश ५ सरकारको असफलता मानिएको छ ।
यी र यस्ता सामान्यदेखि महत्वकांक्षी योजनाको प्रदेश पाँच सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारका सामान्य उपलव्धि पनि अनुभुति हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । अझ करको दायरा बढाउँदा व्यापार/व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या परेको उनीहरु बताउँछन् । आफ्ना घोषित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिन सकेन । सरकारी भवन निर्माण र मन्त्रालय व्यावस्थापनमा मात्र खर्च भएको छ । आफ्ना घोषणा कार्यान्वनमा अधिकारको अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापन नै समस्या रहेको प्रदेश सरकार बताउँछ । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न असजिलो भएको तर्क उनीहरुको छ । केही ऐन संघले जारी नगर्दा कठिनाई पक्कै छ । अर्कोतर्फ प्रदेश आफैं बनाउनुपर्ने ऐन पनि बन्न सकेको छैन ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ ले प्रदेशको अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।
–प्रदेश खानेपानी, परिवहन
यी सहित २१ अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानतः प्रदेशले प्राप्त गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा दोष संघलाई मात्र दिएर पन्छिनु कति उचित होला ?